Xildhibaanaddii Barlamaanka oo safaf ugu jira Xarunta Barlamaanka – All Hadaaftimo Warar Sugan o Run ah
Xildhibaanaddii Barlamaanka oo safaf ugu jira Xarunta Barlamaanka
Allhadaaftimo April 4, 2018 Uncategorized
Ciidamada ammaanka Dowladda Federaalka Soomaaliya ayaa xalay saq dhexe waxa ay xireen wadooyinka waa weyn ee magaalada Muqdisho ee caasimadda Soomaaliya, maadaama maanta lagu balansan yahay kulanka Baarlamaanka oo xiisad siyaasadeed wata.
Ciidamo cusub oo laga soo bixiyay xerooyinkooda ayaa lagu soo daadiyay Isgoysyada Magaalada, kuwaasi oo wata Hubka culus, waxayna taagan yihiin Isgoysyada Magaalada, waxayna ku jira feejignaan dheeri ah.
Wadooyinka ugu badan ee xiran, ayaa ah kuwa ku xayndaaban xarunta Golaha Shacabka ee Magaalada Muqdisho, halkaasi oo lagu arkaayo gaadiidka dagaalka dowladda.
Ciidanka ayaa adkeynaya ammaanka Magaalada gaar ahaan aagga Xarunta Golaha Shacabka.
Si la mid ah wadooyinka sida ay u xiran yihiin waxaa u xiran wadada ka timaado Daljirka Daahsoon, wadada ka
Previous Musharaxa Madaxwynaha Puntland ee 2019 Eng Jebiye ayaa dhaqaale ugu deeqay Wadada Ceeldaahir Ceerigaabo
Next Fanaanada Sahra Axmed Jaamac oo ku geeriyootay Magaalada Hargaysa